बिपतमा सरकार खै ?::elumbinikhabar.com
बिपतमा सरकार खै ?
लेख ःकमल रायमाझी
नेपालमा बेला बेलामा आउने विपतको उचित व्यवस्थापन नहँुदा विपतमा पर्नेहरु समस्यामा देखिन्छन् । मौसम अनुसार आउने विपतले धनजनको ठूलो क्षती हुने गरेपनि यसको रोकथाम र समस्यामा परेका परिवारहरुको उचित र सहज व्यवस्थापन गर्नमा सरकार सधैँ चुकेको पाइन्छ ।
२०७२ साल वैशाख १२ गते आएको भुकम्पले देशमा ठूलो धनजनको क्षती भएको यति लामो समय हँुदा पनि क्षती व्यहोरेका परिवारले अहिलेसम्म पनि पूर्ण रुपमा राज्यबाट प्रचार गरे जस्तो राहत नपाउनु पनि यसको उदारण हो । बेला बेलामा तराइमा हुने डुबान, पहाडमा हुने बाढी पहिरोबाट जनताले पाउने दुःखमा सरकार पुग्न सकेको छैन । यसको ज्वलन्त उदाहरण हो बारा र पर्सामा हालै आएको हावाहुरी सहितको आँधी । जसले यी दुई जिल्लामा २७ जनाको ज्यान गएको छ भने सयौँ घाइते बनाएको छ । आँधीबाट १ हजार ४० घरमा क्षती पुगेको छ ।
जसका कारण लगभग २ हजार परिवार घरबार विहीन बनेको २ नम्बर प्रदेश सरकारले जानकारी दिएको छ । आँधी आएसँगै विभिन्न संघसंस्था र राजनीतिक दलका नेताहरु र स्वयम् सरकार समेत राहत वितरण र विपतमा परेकाहरुको घरआँगनमा पुगेको स्वाङ गर्दै सामाजिक सञ्जाल र मिडियामा प्रचार गरिरहेको देखिन्छ । उनीहरुले प्रचारमा देखाएको सहयोग वास्तविक पीडितको पक्षमा कमै मात्रामा पुगेको पाइन्छ । प्रचारमुखी हाम्रो समाजले वास्तविक क्षेत्रमा पुग्नुपर्ने र हुनुपर्र्नेव्यवस्थापन नहुँदा विपतमा परेका जनताले दुःख पाइरहेका छन् । यता प्रचार र सेल्फी खिच्नेहरुका लागि नौटंकी बन्ने गरेको प्राकृतिक विपत्ति जुन अहिले बारा, पर्सामा पनि देखिएको छ ।
व्यक्ति, राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार र केन्द्र सरकारले आ–आफ्नो ढंगले सहयोगको घोषणा गरेका छन् तर पीडितले खुल्ला आकाशमुनि रात कटाउनु परेको छ । एउटा पालसम्म नपाएर दुःख पाएका पीडितहरुका लागि यस्ता घोषणाहरु आकाशको फल आँखा तरी मर सरह भएको छ । राज्य भएको अनुभव जनताले गर्नुपर्ने हो । यहाँको विपत् व्यवस्थापनमा कसको के भूमिका हो ? सरकारसँग यसको उत्तर नै छैन । मनलाग्दी रुपमा बोलिएको छ, प्रचार गरिएको छ । यसरी आफू आफू नै सहयोगको घोषणा गर्नु भन्दा प्रदेश सरकारसँगको सहकार्यमा एकद्वार प्रणालीबाट विपतमा परेका जनतासँग पुग्न सके समान रुपमा सहयोग व्यवस्थापन हुने थियो ।
सरकारले आगामी दिनमा यस्ता विपत्तिहरुलाई मध्यनजर गरेर एकद्वार प्रणालीको विकास गरेमा समयमा नै यस्ता विपतको समाधान गर्न राज्य तयार भएको अनुभूति जनताले गर्ने थिए ।
विचार बाट अन्य समाचार